'Ratsy Resident: Tongasoa eto amin'ny tanànan'i Raccoon' dia isaina-R - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly 'Ratsy Resident: Tongasoa eto amin'ny tanànan'i Raccoon' no isaina-R
'Ratsy Resident: Tongasoa eto amin'ny tanànan'i Raccoon' no isaina-R
Fotoana Gory Zombie!
by Trey Hilburn III Septambra 12, 2021 594 hevitra
Eny, tsara, ny vaovao mahafaly tsy mitsahatra mivoaka amin'ny vaovao Resident evil tobin'ny sarimihetsika. Ambonin'ireo sary mahatalanjona sy marina rehetra izay navoaka hatramin'ny ahitra maitso ka hatrany amin'ny fitaovam-piadiana sy ny toerana dia ity Resident evil ao an-tsaina ny lalao fotoana lehibe. Tonga izao ny fanambarana fa Tongasoa eto amin'ny tanànan'i Raccoon dia omena isa R ho an'ny fiteny, fihetsika mahery setra ary herisetra mahery manerana. Ity dia fiaingana azo antoka avy amin'ny sarimihetsika Paul WS Anderson sy Milla Jovovich izay nifototra tamin'ny lalao.
Ny synopsis ho an'ny Ratsy mponina: Tongasoa eto amin'ny tanànan'i Raccoon mandeha toy izao:
Raha vao ny trano miroborobo an'ny Umbrella Corporation, mpivarotra fanafody, dia tanànan'ny Midwestern efa ho faty izao i Raccoon City. Nandao ny tanàna ny tany fivarotan'ilay orinasa… niaraka tamin'ny zava-dratsy mahery vaika vokarin'ny tany. Rehefa avoaka io faharatsiana io dia miova mandrakizay ny mponin'ny tanàna… niova… ary vondron'olona sisa velona dia tsy maintsy miara-miasa hamaky ny fahamarinana ao ambadiky ny elo ary hamakivaky ny alina.
Ilay lisitra dia manana lisitra goavambe ahitana an'i Kaya Scodelario toa an'i Claire Redfield, Robbie Amell ho Chris Redfield, Avan Jogia ho Leon S. Kennedy, Hana John-Kamen ho Jill Valentine, Tom Hopper toa an'i Albert Wesker, Donal Logue amin'ny maha Brian Irons, Lily Gao as Ada Wong, Nathan Dale as Brad Vickers, and Marina Mazepa as Lisa Trevor.
Ratsy mponina: Tongasoa eto amin'ny tanànan'i Raccoon tonga ny 24 Novambra.
Faly ve ianao momba ilay torolàlana Johannes Roberts Resident evil? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.